Yintoni i-ROI kwiNtloko? | Martech Zone
Yintoni i-ROI kwiNtloko?
NgoLwesibini, Juni 9, 2009 NgoMgqibelo, ngoJuni 27, 2015 Douglas Karr
Iinkampani zesoftware kunye nesoftware njengenkampani yeenkonzo zicinga ukuba zithengisa itekhnoloji. Itekhnoloji yokuthengisa ilula… inemilinganiselo, ithatha indawo, inezinto ezichaziweyo, imida, amandla… kunye neendleko. Ingxaki kukuba uninzi lwabantu aluthengi itekhnoloji.
Nika umbutho wentengiso enkulu ixesha elaneleyo kwaye banokukhohlisa nayiphi na isicelo sokucebisa kwisicwangciso esiphumelelayo nesinenzuzo senkampani. Ndisebenzela inkampani enokhuphiswano oluphambili (ngokokubona kwethu - hayi eyam) sisoftware evulelekileyo. Ukuba sithengise isoftware ebiza kakhulu ekhuphisana ngqo nesoftware yasimahla, ngekhe sibe nabathengi abangama-300 +. Isizathu sokuba sikhula kukuba asiyo nyani ukuthengisa isoftware -Sithengisa iziphumo.
Ithemba lethu likholelwa ukuba ixabiso lokuhamba kwiqonga lethu lokubloga kukuba iya kuba nesiphumo Akukho ntloko ezantsi kwendlela. Akukho ntloko ngexesha lokuphumla, Akukho ntloko kugcino, Akukho ntloko kwimiba yezokhuseleko, Akukho ntloko ngokonakala, Akukho ntloko ekusebenzeni, Akukho ntloko ekufundiseni abasebenzisi, Akukho ntloko kuba kunzima ukuyisebenzisa… kwaye ikakhulu Akukho ntloko ukusuka ekusileleni.
Mhlawumbi ukhuphiswano lwethu lokwenyani yiTylenol!
Amanye amathemba avuyisayo ngamathuba entloko… kulungile… asizelanga bona apha. Kungcono sisebenze nabaxumi abagxile kwiziphumo. Iziphumo njengoko zichaziwe kubo, kungekhona us.
Nanini na xa inkampani yakho ityala imali kwitekhnoloji, ayisiyiyo izixhobo zekhompyutha kunye nesoftware (uxolo iinjineli!) Ezithengayo-nokuba zipholile kangakanani. Eyona nto ityalwa yinkampani yakho ngabantu abaphambi nangasemva kwemveliso. Inkampani yakho ibeka imali kumthengisi abathembayo. Inkampani yakho ibeka imali kusomashishini oqale inkampani oyaziyo njengenkokeli. Inkampani yakho ityala imali ebantwini-abantu abasombulule ingxaki eqhubeka ikunika iintloko.
Omnye umxhasi osebenzela icandelo likarhulumente kutshanje undixelele:
UDoug-andikhathali ROI. Andikhathali nokuba singakanani isicelo sakho esinokusenzela sona. Andikhathali malunga nee-upsell. Andikhathali ngetekhnoloji. Isizathu sokuba ndihlawule inkampani yakho kukuba ukhona ukuphendula umnxeba okanye i-imeyile xa ndinombuzo… kwaye uyazazi iimpendulo. Qhubeka uphendule umnxeba kwaye undincede kwaye siza kuhlala apha. Yeka ukuphendula umnxeba ndizakufumana umntu okwaziyo.
Kungenxa yoko le nto inkonzo yabathengi iyinto ebaluleke kakhulu kuqaliso olukhulu lwetekhnoloji. Andikhathali nokuba isicelo sakho sipholile kangakanani… xa uqala ukuxelela abathengi bakho ukuba uthini Ayikwazi bancede, ungalindeli ukuba batyikitye uhlaziyo (ungaze ucinge nge-upsell!). Abathengi bakho bafuna impumelelo kwaye bayakuthemba ukuba ubanike. Kungcono uphulaphule kwaye uphendule. Ngcono nangakumbi-kuya kufuneka ushukume ngokuthe ngqo ukwakha impumelelo yabathengi bakho.
Nokuba ngaphakathi kweSoftware njengeshishini leNkonzo, iinkampani zifumanise ukuba azinakho ukufihla emva kwephepha lenkxaso yabathengi okanye isiseko solwazi… okanye okubi kakhulu, iqonga labathengi. Abathengi be-SaaS kufuneka baqonde indlela yokufumana ngokupheleleyo isisombululo abasityalileyo ukuze baphumelele. Oko kufuna abasebenzi abanobuchule nabanamava abakuqondayo ukuba kuthatha ntoni.
Ezi nkokeli ziyawuqonda umendo wokunganyangeki, bayayiqonda indlela yokufunda abathengi kwaye babone ukuba ngaba ngamathemba amahle okukhula okanye ubungqina babathengi… uninzi lwabo bonke bayayiqonda indlela yokuchaphazela abathengi buqu. Ayifuni iinjongo ezibonakala zimfutshane ezingenantlonelo, zithintela iinkqubo ezingakhathaleli impumelelo yabathengi, okanye okubi kakhulu ... ulawulo oluncinci xa oovimba sele benqongophele. Ifuna ukuqesha abantu obathembayo, ubavumele ukuba bathathe izigqibo ezinkulu egameni lenkampani, kwaye basuse yonke imiqobo yokusebenzela abathengi ngokufanelekileyo (kunye nenzuzo).
Ngaba unika abathengi bakho impumelelo? Okanye ngaba abasebenzi bakho bayabanika nje iintloko ezingaphezulu?
tags: delivraedgerankUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethiIbhentshi elingenzi nzuzowebsUkunika ingxelo kwezentlalo